ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ ဘုရင်တစ်ဆူဖြစ်နေတဲ့ ရီးယဲလ်
ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ ရီးယဲလ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို မီနိုင်မယ့်အသင်း မရှိတော့ဘူးလား
29 May 2018 . 3:08 PM
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၁၃)ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ရီးယဲလ်အသင်း ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မေးခွန်းတစ်ခု ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အမီလိုက် နိုင်မယ့် အသင်း မရှိနိုင်တော့ဘူးလားဆိုတာပါပဲ။ ချန်ပီယံလိဂ်ဆိုတာက ဥရောပက ထိပ်သီးအသင်းတွေ အများစု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်တာကြောင့် ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ဆိုတာက တော်ရုံစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက်တော့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားက ပုံမှန်ယူနေကြ ဆုဖလားတစ်ခုလို ဖြစ်နေပြီ။ နောက်ဆုံး(၅)နှစ်အတွင်း (၄)ကြိမ်ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့အပြင် နည်းပြဇီဒန်း Zidane ကလည်း ဒီဆုဖလားကို (၃)နှစ်ဆက်တိုက် ရယူခဲ့တာကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားက ရီးယဲလ်တစ်သင်းတည်းအတွက်များ သတ်မှတ်ထားသလို့တောင် ထင်ရတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ခေတ်မှာ ဆုဖလား(၃)ကြိမ်ဆက် ယူထားတဲ့ ပထမဆုံးအသင်း၊ အရင် ဥရောပဖလားတုန်းကလည်း ခေတ်ဦးပိုင်းနှစ်တွေမှာ (၅)ကြိမ်ဆက် ရယူခဲ့တဲ့အသင်း မှတ်တမ်းတွေက တခြား ဥရောပထိပ်သီးအသင်း တွေထက် အပြတ်အသတ်အသာရနေတယ်။ ဒါ့အပြင် ချန်ပီယံလိဂ်(အရင် ဥရောပဖလား)သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်း နိုင်ပွဲအများဆုံးအသင်း၊ သွင်းဂိုးအများဆုံးအသင်းဆိုတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။
European Cup/Champions League record
Real Madrid – 421 Games 252 Win 937 Goals 13 Trophy
Bayern – 327 Games 186 Win 651 Goals5Trophy
Barcelona- 290 Games 168 Win 576 Goals5Trophy
Man United – 259 Games 142 Win 471 Goals3Trophy
Juventus – 257 Games 128 Win 402 Goals2Trophy
AC Milan – 241 Games 119 Win 399 Goals7Trophy
Benfica – 227 Games 100 Win 365 Goals2Trophy
Porto- 223 Games 98 Win 320 Goals2Trophy
Liverpool- 178 Games 95 Win 329 Goals5Trophy
Ajax 177 Games 81 Win 270 Goals4Trophy
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲ စတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၅၈ ခုနှစ်က စပြီး ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုစီအလိုက် အသင်းတွေရဲ့ နိုင်ပွဲအများဆုံး၊ သွင်းဂိုးအများ စာရင်းကို ကြည့်ရင်လည်း ရီးယဲလ်အသင်းက (၃)ကြိမ်အထိ ပါဝင်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
1950s Real Madrid 32 Games 23 Win 93 Goals
1960s Real Madrid 63 Games 37 Win 171 Goals
1970s Ajax 37 Games 26 Win 83 Goals
1980s Liverpool 39 Games 27 Win 85 Goals
1990s AC Milan 55 Games 30 Win 81 Goals
2000s Man United 116 Games 63 Win 197 Goals
2010s Real Madrid 102 Games 70 Win 249 Goals
ရီးယဲလ်အသင်းကို အောင်မြင်မှုတွေ ရအောင် ဦးဆောင်နေတဲ့ နည်းပြကြီး ဇီဒန်းအတွက်လည်း စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေက တပွေ့တပိုက်နဲ့ပါ။ ဘောလုံးသမားဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ခဲ့သူတိုင်း နည်း ပြ ဘ၀ရောက်ရင် အောင်မြင်မှု မရတတ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို ဇီဒန်းက ဆုဖလားတွေနဲ့ ချေဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ကိဗ်မြို့က အောင်ပွဲဟာ ဇီဒန်းကို ဥရောပရဲ့ GOAT (Greatest Of All Time)စာရင်းဝင် နည်းပြအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်စေခဲ့တယ်။
ဇီဒန်းရဲ့ ဥရောပပြိုင်ပွဲ စံချိန်မှတ်တမ်းများ
– ချန်ပီယံလိဂ်(ဥရောပဖလား)ကို (၃)နှစ်ဆက်တိုက် ရယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနည်းပြ။
– ဘော့ဘ်ပီယာစလေ Bob Paisley (လီဗာပူးလ် -၃ ကြိမ်)၊ အန်ဆယ်လော့တီ Carlo Ancelotti (အေစီမီလန် -၂ ကြိမ်၊ ရီးယဲလ် -၁ကြိမ်)တို့လိုပဲ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို (၃)ကြိမ် ရယူခဲ့တဲ့ နည်းပြ။
– ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား(၃)ကြိမ်ကို အသက်အငယ်ဆုံး(၄၅နှစ်)နဲ့ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြ။
– ချန်ပီယံလိဂ်၊ ဥရောပစူပါဖလား၊ ဖီဖာကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်(ရှုံးထွက် ၁၆ သင်းကနေ ဗိုလ်လုပွဲအထိ) (၁၈)ပွဲစလုံးမှာ ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့နည်းပြ။
– ရီးယဲလ်နည်းပြဘ၀ (၁၄၉)ပွဲမှာ ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့တာကြောင့် ပျမ်းမျှ(၁၇)ပွဲကို ဆုဖလားတစ်ခု နှုန်း ရယူနိုင်ခဲ့သူ။
– ပြင်သစ်နည်းပြတွေထဲမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ပထမဆုံး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူ
– မီဂွယ်လ်မူနော့ဇ် Miguel Munoz နောက်ပိုင်း ချန်ပီယံလိဂ်(ဥရောပဖလား)ကို ကစားသမားဘ၀မှာသာမက နည်းပြအဖြစ်ပါ ရယူနိုင်ခဲ့သူ။
ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ။ ရီးယဲလ်နဲ့ နည်းပြဇီဒန်းတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတွေကတော့ တကယ့်ကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဒီလိုအောင်မြင်မျိုး ၊ ဆုဖလားစံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို လိုက်မီနိုင်မယ့် အသင်းဆိုတာ ရှိနိုင်ပါဦးမလား . . . .
Photo: Evening Standard,Football Premium,Goal.com
ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ ရီးယဲလျရဲ့ အောငျမွငျမှုကို မီနိုငျမယျ့အသငျး မရှိတော့ဘူးလား
ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၁၃)ကွိမျမွောကျအဖွဈ ရီးယဲလျအသငျး ရရှိခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ မေးခှနျးတဈခု ထှကျပျေါ လာခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ဥရောပဘောလုံးလောကမှာ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို အမီလိုကျ နိုငျမယျ့ အသငျး မရှိနိုငျတော့ဘူးလားဆိုတာပါပဲ။ ခနျြပီယံလိဂျဆိုတာက ဥရောပက ထိပျသီးအသငျးတှေ အမြားစု ပါဝငျယှဉျပွိုငျနတေဲ့ပွိုငျပှဲဖွဈတာကွောငျ့ ဒီလိုပွိုငျပှဲမြိုးမှာ ဗိုလျစှဲဖို့ဆိုတာက တျောရုံစှမျးဆောငျရညျမြိုးနဲ့ မဖွဈနိုငျဘူး။ ဒါပမေဲ့ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျတော့ ခနျြပီယံလိဂျဖလားက ပုံမှနျယူနကွေ ဆုဖလားတဈခုလို ဖွဈနပွေီ။ နောကျဆုံး(၅)နှဈအတှငျး (၄)ကွိမျဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့အပွငျ နညျးပွဇီဒနျး Zidane ကလညျး ဒီဆုဖလားကို (၃)နှဈဆကျတိုကျ ရယူခဲ့တာကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျဆုဖလားက ရီးယဲလျတဈသငျးတညျးအတှကျမြား သတျမှတျထားသလို့တောငျ ထငျရတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျခတျေမှာ ဆုဖလား(၃)ကွိမျဆကျ ယူထားတဲ့ ပထမဆုံးအသငျး၊ အရငျ ဥရောပဖလားတုနျးကလညျး ခတျေဦးပိုငျးနှဈတှမှော (၅)ကွိမျဆကျ ရယူခဲ့တဲ့အသငျး မှတျတမျးတှကေ တခွား ဥရောပထိပျသီးအသငျး တှထေကျ အပွတျအသတျအသာရနတေယျ။ ဒါ့အပွငျ ခနျြပီယံလိဂျ(အရငျ ဥရောပဖလား)သမိုငျးတဈလြှောကျမှာလညျး နိုငျပှဲအမြားဆုံးအသငျး၊ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအသငျးဆိုတဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားတာပါ။
ဒါတငျပဲလားဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ဥရောပဖလားပွိုငျပှဲ စတငျကငျြးပခဲ့တဲ့ ၁၉၅၈ ခုနှဈက စပွီး ဆယျစုနှဈ တဈခုစီအလိုကျ အသငျးတှရေဲ့ နိုငျပှဲအမြားဆုံး၊ သှငျးဂိုးအမြား စာရငျးကို ကွညျ့ရငျလညျး ရီးယဲလျအသငျးက (၃)ကွိမျအထိ ပါဝငျခဲ့တာကိုလညျး တှရေ့မှာပါ။
ရီးယဲလျအသငျးကို အောငျမွငျမှုတှေ ရအောငျ ဦးဆောငျနတေဲ့ နညျးပွကွီး ဇီဒနျးအတှကျလညျး စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှကေ တပှတေ့ပိုကျနဲ့ပါ။ ဘောလုံးသမားဘဝမှာ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျခဲ့သူတိုငျး နညျး ပွ ဘဝရောကျရငျ အောငျမွငျမှု မရတတျဘူးဆိုတဲ့ အခကျြကို ဇီဒနျးက ဆုဖလားတှနေဲ့ ခဖြေကျြနိုငျခဲ့ပွီ။ ကိဗျမွို့က အောငျပှဲဟာ ဇီဒနျးကို ဥရောပရဲ့ GOAT (Greatest Of All Time)စာရငျးဝငျ နညျးပွအဖွဈ မှတျတမျးဝငျစခေဲ့တယျ။
ဇီဒနျးရဲ့ ဥရောပပွိုငျပှဲ စံခြိနျမှတျတမျးမြား
– ခနျြပီယံလိဂျ(ဥရောပဖလား)ကို (၃)နှဈဆကျတိုကျ ရယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးနညျးပွ။
– ဘော့ဘျပီယာစလေ Bob Paisley (လီဗာပူးလျ -၃ ကွိမျ)၊ အနျဆယျလော့တီ Carlo Ancelotti (အစေီမီလနျ -၂ ကွိမျ၊ ရီးယဲလျ -၁ကွိမျ)တို့လိုပဲ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို (၃)ကွိမျ ရယူခဲ့တဲ့ နညျးပွ။
– ခနျြပီယံလိဂျဖလား(၃)ကွိမျကို အသကျအငယျဆုံး(၄၅နှဈ)နဲ့ ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွ။
– ခနျြပီယံလိဂျ၊ ဥရောပစူပါဖလား၊ ဖီဖာကလပျကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတှရေဲ့ ရှုံးထှကျအဆငျ့(ရှုံးထှကျ ၁၆ သငျးကနေ ဗိုလျလုပှဲအထိ) (၁၈)ပှဲစလုံးမှာ ရာနှုနျးပွညျ့ နိုငျပှဲရခဲ့တဲ့နညျးပွ။
– ရီးယဲလျနညျးပွဘ၀ (၁၄၉)ပှဲမှာ ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့တာကွောငျ့ ပမျြးမြှ(၁၇)ပှဲကို ဆုဖလားတဈခု နှုနျး ရယူနိုငျခဲ့သူ။
– ပွငျသဈနညျးပွတှထေဲမှာ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ပထမဆုံး ဆှတျခူးနိုငျခဲ့သူ
– မီဂှယျလျမူနော့ဇျ Miguel Munoz နောကျပိုငျး ခနျြပီယံလိဂျ(ဥရောပဖလား)ကို ကစားသမားဘဝမှာသာမက နညျးပွအဖွဈပါ ရယူနိုငျခဲ့သူ။
ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ။ ရီးယဲလျနဲ့ နညျးပွဇီဒနျးတို့ရဲ့ အောငျမွငျမှုမှတျတမျးတှကေတော့ တကယျ့ကို မယုံကွညျနိုငျလောကျအောငျပါပဲ။ ဒီလိုအောငျမွငျမြိုး ၊ ဆုဖလားစံခြိနျမှတျတမျးတှကေို လိုကျမီနိုငျမယျ့ အသငျးဆိုတာ ရှိနိုငျပါဦးမလား . . . .